155Mb / s SFP 1310nm / 1550nm 20km DDM Simplex LC nyocha transceiver
155Mb / s SFP 1310nm / 1550nm 40km DDM Simplex LC nyocha transceiver
Ndị transceivers bụ imewe maka ngwa ngwa Ethernet, SDH / SONET, ngwa ngwa WDM. Mpaghara transceiver kwadoro na IEEE802.3Z na SFF-8472. O dakọtara na ihe RoHS chọrọ.
155Mb / s SFP 1310nm / 1550nm 80km DDM Simplex LC nyocha transceiver
Ndị transceivers bụ imewe maka SONET, SDH, ngwa ngwa njikọ ndị ọzọ. Mpaghara transceiver kwadoro na IEEE802.3Z na SFF-8472. O dakọtara na ihe RoHS chọrọ.
Ndị transceivers bụ imewe maka SONET, SDH na ngwa njikọ anya ndị ọzọ. Mpaghara transceiver kwadoro na IEC60825-1 na SFF-8472. O dakọtara na ihe RoHS chọrọ.
6Gb / s SFP + 1310nm 10km DDM DFB Duplex LC nyocha transceiver optical
Ndị transceivers bụ imewe maka Metro / Access Networks, Fiber Channel na ngwa CPRI. Ihe ntụgharị transceiver kwekọrọ na SFP + Multi-Source Agreement (MSA) ma dakọtara na ihe RoHS chọrọ.
6Gb / s SFP + 1310nm 20km DDM DFB Duplex LC nyocha transceiver optical
6Gb / s SFP + 1310nm 40km DDM DFB Duplex LC ngwa ntụgharị transceiver
6Gb / s SFP + 1310nm 70km DDM DFB Duplex LC nyocha transceiver optical
40Gb / s QSFP + 1310nm 2km DDM Duplex LC transceiver optical
40Gb / s 2km QSFP + Transceiver bụ modul transceiver nke emere maka 40GBASE-LR4, InfiniBand QDR na DDR njikọta na ngwa njikọ 40G Telecom. Imewe a kwekọrọ na 40GBASE-LR4 nke ọkọlọtọ IEEE P802.3ba na QSFP Multi-Source Agreement (MSA) na QDR / DDR Infiniband ọnụego data